AT&T ले पहिले नै 5G परीक्षण गर्दछ: LTE | भन्दा 10-100 पटक छिटो आईफोन समाचार
AT&T ले 5G: १० देखि १०० पटक LTE भन्दा चाँडो परीक्षण सुरू गर्दछ
जब पेफेफोनले गत वर्ष भोडाफोनबाट मोभिसारमा कभरेज परिवर्तन गर्‍यो, यसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई G जी वा एलटीई प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दै थियो। सुरुमा मैले भिन्नता देखिन, किनकि मेरो क्षेत्रमा कभरेज थिएन, तर पहिलो पटक मैले शहर भएको शहरमा पुगें, म विश्वास गर्न सक्दिन: मेरो आईफोन the सडकमा भन्दा बढी गतिको भयो। मसँग फाइबर अप्टिक्सको साथ घरमा थियो, + mb०mb / + २mbmb को बारेमा। मैले 4G जीको दिनमा ती गतिहरूको सपना कहिले पनि देखेको थिएन, तर AT&T त्यहाँ रोक्न चाहँदैन र चाँडै 5G परीक्षण सुरू गर्नेछ।
AT&T ले हामीले अर्को जडानको साथ कुन गति प्राप्त गर्ने भनेर निर्दिष्ट गर्न चाहेको छैन, तर यो उन्नत भएको छ कि यो LTE / 10G भन्दा १० देखि १०० गुणा बढी हुनेछ, जुन लगभग केहि अधिकतम गतिमा अनुवाद गर्दछ। २ 299600 75400 M०० Mbit / s डाउनलोड र लगभग XNUMX XNUMX००Mbit / s अपलोड। मलाई लाग्छ कि इन्स्टाग्राममा तस्विरहरू अपलोड गर्न र दिनमा केही वाट्सएप पठाउन पर्याप्त हुनेछ, के तपाईलाई लाग्दैन?
AT&T ले 5G 299600Mbit / s मा डाउनलोड गर्न सक्षम हुनेछ भन्छ
जे भए पनि, हामीले अझ धेरै वर्षहरू हेर्नुपर्नेछ, यो नयाँ जडानको परीक्षण गर्न, विशेष गरी स्पेन जस्ता देशहरूमा। AT&T 5G लाई मनपर्ने शहरमा ल्याउन चाहन्छ २०१ Aust को अन्त्य अघि अस्टिन र यसको G जी पूर्वाधार कम्पनीले सञ्चालन गरेको धेरै क्षेत्रहरूमा पुग्न सक्दैन २०२० सम्म। भेरिजनले २०१5मा G जी समाधानको परीक्षण पनि शुरू गर्नेछ।
एटी एण्ड जीको G जी नेटवर्क मिलिमिटर वेभहरू, नेटवर्क प्रकार्य भर्चुअलाइजेशन (NFV), र सफ्टवेयर-परिभाषित नेटवर्कहरू (SDN) जस्ता प्रविधिहरूमा आधारित हुनेछ। अपरेटरले पहिले नै यसको वर्चुअलाइज्ड नेटवर्कमा १ million लाख वायरलेस ग्राहकहरू सारिएका छन् र भन्छन् कि यस वर्ष धेरै मिलियन बढी माइग्रेट हुनेछ। मा अर्को चार बर्ष, AT&T ले यसको नेटवर्कको% 75% भर्चुअलाइज गर्न चाहन्छ।
मलाई थाहा छ अहिले त्यहाँ केहि प्रयोगकर्ताहरू छैनन् जुन सोचिरहेका छन् -हामीले कुर्नु पर्छ«। तर केको लागि? यदि म इमान्दार हुनु पर्छ भने, मलाई लाग्दैन कि हामी यस मुद्दाको बारे बौलाहा हुनुपर्दछ, कम्तिमा वेबमा अहिले जस्तो छ। यसको मतलब मेरो मतलब यो छ कि यदि हामीसँग १ जीबी डाटा योजना छ र, उत्तम रूपमा, हामी यूट्यूबमा भिडियोहरू हेर्न जानेछौं वा संगीत सुन्नेछौं। स्ट्रिमिङ, LTE को साथ हामी कभर छौं। के अधिक हो, मलाई लाग्छ कि with जी संग राम्रो अवस्थामा हामी धेरै जसो केसहरुमा पनि समाहित छन्। G जी नयाँ दरहरूको साथ आउनुपर्दछ जुन हामीलाई चिन्ता नगरिकन यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। जे भए पनि, हामी मध्ये धेरैले अझै पनि वर्षहरू कुर्नुपर्नेछ जुन हाम्रो क्षेत्रमा G जी को बारेमा कुरा गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » AT&T ले 5G: १० देखि १०० पटक LTE भन्दा चाँडो परीक्षण सुरू गर्दछ
ठिक छ, मलाई लाग्छ कि यो व्हाट्सएपलाई फोटो र भिडियो कम्प्रेस गर्न रोक्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई मूल गुणको साथ पठाउन,
अधिक डाउनलोड स्पीडको प्रयोग के हो जब त्यहाँ डाउनलोड सीमा अझै पनी छ यदि छोटो अवधिको लागि "सामान्य जीवन" गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई पोलिश गर्नुभयो।
स्टीव जॉब्सको NexT कम्प्युटर परिचय अज्ञात भिडियो